TAMIL VS BOLLYWOOD: Labaddaan Shirkadood Sanadkaan 2017 Yaa Saameeyn Ku Yeeshay Shacabka Dhankooda & Natiijadda Oo Kaa Yaabindoonta?
Waxaa Qoray Maxamuud Jamuuni / Waxaa La Daabacay Wednesday, 06 Dec 2017 08:40 AM / No Comments
Bollywood-ka waxaa uu heystaa mid kamid ah jilaayaasha ugu wanaagsan door walba , waxaana jira jilaayaal guulo waa weeyn ka sameeyeen filimaanta ay jilayaan iyo sidoo kale bandhiga jiliinkooda.
Haddaba Waxaa la ogaaday Bollywood & Tamil awoodooda gaarka ah ay ku leeyihiin sanadkaan dhanka shacabka .
1-Bollywood:Qiimeeyntaan waxaa lagu sameeyey barta Twitter-ka , waxaana sanadkaan Bollywood-ka ay soo saareen filimaan lagu wada qancay kuwaas oo saameeyn xoogan sameyeen iyo sidoo kale wax walba oo ku saabsan awooda gaarka ah ee filimaantaas.
Sida aan la wada socono sanadkaan 2017 waxaa shaashada caalamka la saaray filimaan kala duwan oo shirkaddo kala gaar ah sameeyeen, waxaa filimadii ugu shidnaa ee Bollywood-ka sanadkaan la daawaday kamid ah , Raees, Kaabil, Housefull 4 iyo kuwa kale balse weli ma ahan kuwa looga hadal heynta badan yahay.
2-Tamil:Waa shirkadda labaad ee soo saarta filimaanta waxaana sanadkaan ay usoo bexeen filimaan ilaa iyo hadda awood ku heeystaan Box Office-ka , waxaana laga yaaban yahay awooda gaarka ah ee ay leedahay.
Jiliin ahaan waxaa shirkadaan aad ga yar Atooriyaasha ku wanaagsan jliinka jaceylka , sidaas darteeda waxaa adkaanaya in la helo filimaan wada Romantic ah.
Waxaana shirkadaan ay noqotay midda looga hadal heeyn badan dhanka bulshada filimaanta ay soo saartay gaar ahaan fiimka Baahubali 2 iyo Mersal oo isagane ah filim kale oo awood ku leh Box Office-ka.
Labadaan filim oo ay soo jileen jilaayaal shirkadda Tamil ka shaqeeyaan ayaa noqdeen labada filim ee sanadkaan soo jiiteen daawadiyaasha.